Su'aalaha La Weydiiyo - Ningbo Intech Intelligent Technology Co., Ltd.
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan helnay ogolaanshahaagii ugu dambeeyay ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan la shaqeynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa in aan wax ka qabanno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.